ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ကိုဗစ်စမ်းသပ်မှု
ကာကွယ်ဆေး မပေါ်ခင်က ဒီရောဂါပိုးရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာနဲ့ အခု ကာကွယ်ဆေး ပေါ်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း စမ်းသပ်မှုမှာ ဘာတွေ သတိထားဖို့ လိုပါသလဲ။ ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်က ပြောပြ ပေးမှာပါ။
Covid 19 ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဟာ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ လူတွေ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အလုပ်တခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး မပေါ်ခင်ကဒီရောဂါပိုးရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာနဲ့ အခု ကာကွယ်ဆေး ပေါ်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း စမ်းသပ်မှုမှာ ဘာတွေ သတိထားဖို့ လိုပါသလဲ။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ Greenville က Vidant Medical Center အဏုဇီဝဗေဒ ဓါတ်ခွဲခန်း တာဝန်ခံ ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။. ။“ဖြူတို့လုပ်နေတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းက Vidant Medical Center မြောက်ကာရိုလိုင်းနားက microbiology lab ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ လုပ်နေတာ ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ ၂ မျိုးကတော့ ကိုဗစ်ကို ဖြစ်စေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရှိမရှိ သူ့ရဲ့ RNA ကို စမ်းသပ်တာ။ antigen test လုပ်တာရယ်၊ PCR ကို သုံးပြီးတော့ RNA ကို ပွါးများတဲ့နည်းရယ်။ အဲဒီ ၂ ခုက တမျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့ Anti-body ကို တိုင်းတာ။ ကိုယ်ခံအား ရှိမရှိ၊ လက္ခဏာ ရှိမရှိ၊ ရောဂါရှိပြီးသားလူတွေ သူတို့ရဲ့  ကိုယ်ခံအား ရှိလာလားဆိုတဲ့ Anti-body တိုင်းတာပါ။ အဲဒီလိုမျိုး စမ်းသပ်မှု test အမျိုးအစားက (၃) မျိုး၊ ဒါပေမဲ့ ခွဲခြားထားတာကတော့ နှစ်မျိုးပါ။ ရောဂါပိုး ရှိလားရယ်၊ ကိုယ်ခံအား ရှိလားရယ်။”
မေး။. ။“ အဲဒီလိုမျိုး PCR နဲ့ Antigen အဲဒီ ၂ ခု ကွာခြားချက်ကို ပြောပြပေးပါ။ ဘယ်ဟာကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးတယ်ဆိုတာ။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ် ။ ။ “Antigen က များသောအားဖြင့် Primary Care Office တွေမှာ သုံးတာများတယ်။ ဆေးခန်း Clinic တွေမှာ သုံးတာများတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Antigen test တွေက လွယ်လည်းလွယ်တယ်။ မြန်လည်းမြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Antigen test တွေကို အစိုးရက သုံးခွင့်ပြုထားတာက လက္ခဏာပြတဲ့ လူနာတွေပေါ်မှာပဲ သုံးရမယ်လို့ သုံးခွင့်ပြုထားတယ်။ ဆိုတော့ လက္ခဏာ ရှိထားတဲ့လူနာက သူ့ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူနာပြုနဲ့ သွားပြတယ်ဆိုရင် ဆေးခန်းကိုသွားကြတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှာ Point of Care - တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်မှုစက်နဲ့ သုံးတာများတယ်။ ပြီးတော့ PCR စမ်းသပ်မှုကတော့ စမ်းသပ်တဲ့ပုံစံက အမျိုးမျိုးရှိတာကြောင့် ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာပဲ သုံးတာများတယ်ပေါ့နော်။”
မေး ။ ။“ ဒီရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်တဲ့အထဲမှာ ကိုယ်ခံအားစမ်းတာ ဘယ်အချိန်မှာ သုံးပါသလဲ။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ် ။ ။ “ကိုယ်ခံအား စမ်းတာကြတော့ လူနာတစ်ယောက်က လက္ခဏာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ သူ့သဘောနဲ့သူ အရင်တုန်းက ကိုဗစ် ရှိထားလား၊ မရှိထားလား မသိဘူးဆိုတာကို သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီအချိန်မှာ သုံးလို့လည်းရတယ်။ နောက်တစ်ခုကြတော့ လူနာတစ်ယောက်ကို အရေးတကြီးနဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်တယ်ဆိုရင် သူ့မှာ ရောဂါလက္ခဏာ ရှိချင်လဲ ရှိနိုင်တယ်။ မရှိချင်လဲ မရှိနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ တခြားကိစ္စကြောင့်မို့ ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုဗစ် စမ်းသပ်မှုလုပ်တယ်။ ပြီးတော့ အရင်တုန်းက ရှိမရှိကို သိဖို့အတွက်လည်း စမ်းသပ်တယ်။ ဆိုတော့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ စမ်းသပ်တိုင်းတာပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးငါးလ ခြောက်လတုန်းက ကိုဗစ်ရခဲ့သလား၊ မရခဲ့လား မသိခဲ့ဘူး။ လက္ခဏာမရှိပေမယ့်။ အဲဒါကို သိချင်တယ်ဆိုရင် တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်။”
မေး ။ ။ “အခု ကာကွယ်ဆေးတွေ ထွက်နေပြီဆိုတော့ ဒါမျိုးစမ်းသပ်မှု ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲ ပြောပြပေးပါ။
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ် ။ ။“ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီအချိန်မှာ အရေးကြီးတဲ့ စမ်းသပ်မှုကတော့ Antibody Test ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာက အရေးကြီးလာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်က ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသွားပြီ။ ပထမ (၁) လုံးထိုးသည်ဖြစ်စေ။ ဒုတိယ (၁) လုံး ထိုးသည်ဖြစ်စေ ဆေးပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ကိုယ်ခံအား ရှိမရှိဆိုတာကို ဒီ Antibody စမ်းသပ်မှုက ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ အရေးကြီးလာပါပြီ။”
မေး ။ ။ “ကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့ သဘောက ဒီရောဂါပိုး ပွားထားတဲ့ဟာကို ကိုယ်ထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်တာလို့ နားလည်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့လူက ဒီရောဂါပိုး ရောက်နေတယ်လို့ ကိုယ်ထဲကလည်း အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ ကိုယ်ခံအားတွေ ထုတ်တာဆိုတော့ အခုလိုမျိုး ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်တဲ့ဟာနဲ့ ဘာများသွားပြီးတော့ အနှောင့်အယှက်တွေများ ရှိနိုင်သလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါ။”
ဖြေ ။ ။ ရှိတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေးထဲကို ထည့်ထားတာ ဒီဗိုင်းရပ်စ် တစ်ခုလုံးကို ထည့်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ အပိုင်းလေးတပိုင်းကိုပဲ သုံးပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့  ကိုယ်ခံအားကို ကြွအောင်လုပ်ပေးတာ။ အဲဒီအခါကြမှ ကိုယ့်ခန္ဓာကနေ Antibody ထုတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်က COVID Test ကိုဗစ်စမ်းသပ်မှု လုပ်တဲ့ စောစောကပြောတဲ့ Antigen ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ PCR ပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းသပ်မှုနဲ့ သွားပြီးတော့ တိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ False Positive ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါကလဲ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့လူဆိုရင် အကယ်၍ ဖျားလာတယ်၊ နာလာတယ် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုဗစ်ကိုပါ တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဆရာဝန်ကို ပြောပြရမှာက ငါ့မှာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်က False Positive ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်က ကိုဗစ်ကြောင့် ဖျားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအချိန်က repository season တုပ်ကွေး flu တွေလည်း ဖြစ်တယ်။ တခြား ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်း မသိတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလည်း ထိုးထားပြီး၊ ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှု လုပ်မယ်ဆိုရင် False Positive ရနိုင်တာပေါ့။”
မေး ။ ။ “ကိုဗစ်-၁၉ စမ်းသပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် test kit တွေကလည်း သိပ်မရသေးတော့ ဒါမျိုးအခြေအနေ၊ အနေအထားမျိုးမှာ စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှု လုပ်ဖို့အတွက် ဘာတွေအကြံပေးချင်ပါလဲ ဒီလို ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်တာကို။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ် ။ ။ “အဲဒီလိုမျိုး စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့ သိပ်မရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်က ရောဂါလက္ခဏာ ပြလာတာတို့၊ ကိုဗစ်လိုမျိုးဆင်ဆင်ဖြစ်တာတို့၊ အခု ဆောင်းတွင်းရာသီဆိုတာ့ ကိုဗစ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တုပ်ကွေးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုရင် စစ်ဆေးမှုက လုံလုံလောက်လောက် မရှိတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုအကြံပေးလို့ ရသလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် အိမ်မှာပဲ သီးခြားနေဖို့၊ အဓိက ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Antigen Test ကတော့ ရှိနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ Antigen Test က PCR ထက်စာရင် ဆေးရုံတွေ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ သုံးတာများတဲ့အတွက် Antigen Test က နည်းနည်းလွယ်တယ်။ ပြီးတော့ စရိတ်လည်း နည်းနည်းသက်သာတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ရှိနိုင်ရင်တော့ အဲဒါမျိုးနဲ့ စမ်းသပ်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ လုံးဝမစမ်းသပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် Q လုပ်နိုင်ရင်လုပ်၊ မိသားစုနဲ့ခွဲပြီးတော့ သက်သက်နေနိုင်ပါတယ်။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်ပါ။ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိ အမြန်စစ်ဆေးနိုင်မယ့် အိမ်သုံး Covid 19 ပိုးစစ်ကရိယာ တမျိုးကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံက Lucira ကုမ္ပဏီက တီထွင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်အတွင်း အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဒီကရိယာကို ဆရာဝန်ထောက်ခံချက်နဲ့ အရေးပေါ်အခြေနေမှာ သုံးဖို့ FDA က အတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနိုင်ဖို့တော့ အချိန်ယူရအုံးမယ် ဆိုတာကို တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
Covid 19 ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမျးသပျစဈဆေးမှုဟာ လာမယျ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈမှာ လူတှေ နစေ့ဉျလုပျနကြေ အလုပျတခု ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။ ကာကှယျဆေး မပျေါခငျက ဒီရောဂါပိုးရှိမရှိ စမျးသပျစဈဆေးတာနဲ့ အခု ကာကှယျဆေး ပျေါလာခဲ့တဲ့နောကျပိုငျး စမျးသပျမှုမှာ ဘာတှေ သတိထားဖို့ လိုပါသလဲ။
မွောကျကာရိုလိုငျးနားပွညျနယျ၊ Greenville က Vidant Medical Center အဏုဇီဝဗဒေ ဓါတျခှဲခနျး တာဝနျခံ ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“ဖွူတို့လုပျနတေဲ့ ဓါတျခှဲခနျးက Vidant Medical Center မွောကျကာရိုလိုငျးနားက microbiology lab ပေါ့နျော။ အဲဒီမှာ လုပျနတော ၃ မြိုးရှိပါတယျ။ ၂ မြိုးကတော့ ကိုဗဈကို ဖွဈစတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိုးရှိမရှိ သူ့ရဲ့ RNA ကို စမျးသပျတာ။ antigen test လုပျတာရယျ၊ PCR ကို သုံးပွီးတော့ RNA ကို ပှါးမြားတဲ့နညျးရယျ။ အဲဒီ ၂ ခုက တမြိုး နောကျတဈမြိုးကတော့ Anti-body ကို တိုငျးတာ။ ကိုယျခံအား ရှိမရှိ၊ လက်ခဏာ ရှိမရှိ၊ ရောဂါရှိပွီးသားလူတှေ သူတို့ရဲ့ ကိုယျခံအား ရှိလာလားဆိုတဲ့ Anti-body တိုငျးတာပါ။ အဲဒီလိုမြိုး စမျးသပျမှု test အမြိုးအစားက (၃) မြိုး၊ ဒါပမေဲ့ ခှဲခွားထားတာကတော့ နှဈမြိုးပါ။ ရောဂါပိုး ရှိလားရယျ၊ ကိုယျခံအား ရှိလားရယျ။”
မေး။. ။“ အဲဒီလိုမြိုး PCR နဲ့ Antigen အဲဒီ ၂ ခု ကှာခွားခကျြကို ပွောပွပေးပါ။ ဘယျဟာကို ဘယျနရောမှာ သုံးတယျဆိုတာ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ ။ ။ “Antigen က မြားသောအားဖွငျ့ Primary Care Office တှမှော သုံးတာမြားတယျ။ ဆေးခနျး Clinic တှမှော သုံးတာမြားတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Antigen test တှကေ လှယျလညျးလှယျတယျ။ မွနျလညျးမွနျတယျ။ ဒါပမေဲ့ Antigen test တှကေို အစိုးရက သုံးခှငျ့ပွုထားတာက လက်ခဏာပွတဲ့ လူနာတှပေျေါမှာပဲ သုံးရမယျလို့ သုံးခှငျ့ပွုထားတယျ။ ဆိုတော့ လက်ခဏာ ရှိထားတဲ့လူနာက သူ့ဆရာဝနျနဲ့ သှားပွတယျ။ ဒါမှမဟုတျ သူနာပွုနဲ့ သှားပွတယျဆိုရငျ ဆေးခနျးကိုသှားကွတယျဆိုရငျ အဲဒီမှာ Point of Care - တိုကျရိုကျစမျးသပျမှုစကျနဲ့ သုံးတာမြားတယျ။ ပွီးတော့ PCR စမျးသပျမှုကတော့ စမျးသပျတဲ့ပုံစံက အမြိုးမြိုးရှိတာကွောငျ့ ဓါတျခှဲခနျးတှမှောပဲ သုံးတာမြားတယျပေါ့နျော။”
မေး ။ ။“ ဒီရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမျးသပျတဲ့အထဲမှာ ကိုယျခံအားစမျးတာ ဘယျအခြိနျမှာ သုံးပါသလဲ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ ။ ။ “ကိုယျခံအား စမျးတာကွတော့ လူနာတဈယောကျက လက်ခဏာရှိသညျဖွဈစေ၊ မရှိသညျဖွဈစေ သူ့သဘောနဲ့သူ အရငျတုနျးက ကိုဗဈ ရှိထားလား၊ မရှိထားလား မသိဘူးဆိုတာကို သိခငျြတယျဆိုလို့ရှိရငျ အဲဒီအခြိနျမှာ သုံးလို့လညျးရတယျ။ နောကျတဈခုကွတော့ လူနာတဈယောကျကို အရေးတကွီးနဲ့ ဆေးရုံတငျလိုကျတယျဆိုရငျ သူ့မှာ ရောဂါလက်ခဏာ ရှိခငျြလဲ ရှိနိုငျတယျ။ မရှိခငျြလဲ မရှိနိုငျဘူး။ ဒါပမေဲ့ တခွားကိစ်စကွောငျ့မို့ ဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုဗဈ စမျးသပျမှုလုပျတယျ။ ပွီးတော့ အရငျတုနျးက ရှိမရှိကို သိဖို့အတှကျလညျး စမျးသပျတယျ။ ဆိုတော့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးပျေါမှာ မူတညျပွီးတော့ စမျးသပျတိုငျးတာပါတယျ။ ဒီအတိုငျးဆိုရငျ ပွီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးငါးလ ခွောကျလတုနျးက ကိုဗဈရခဲ့သလား၊ မရခဲ့လား မသိခဲ့ဘူး။ လက်ခဏာမရှိပမေယျ့။ အဲဒါကို သိခငျြတယျဆိုရငျ တိုငျးကွညျ့လို့ရတယျ။”
မေး ။ ။ “အခု ကာကှယျဆေးတှေ ထှကျနပွေီဆိုတော့ ဒါမြိုးစမျးသပျမှု ဘယျလောကျ အရေးပါသလဲ ပွောပွပေးပါ။
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ ။ ။“ ကာကှယျဆေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဒီအခြိနျမှာ အရေးကွီးတဲ့ စမျးသပျမှုကတော့ Antibody Test ဖွဈပါတယျ။ ဒီဟာက အရေးကွီးလာတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကိုယျက ကာကှယျဆေး ထိုးပွီးသှားပွီ။ ပထမ (၁) လုံးထိုးသညျဖွဈစေ။ ဒုတိယ (၁) လုံး ထိုးသညျဖွဈစေ ဆေးပတျပွညျ့သှားပွီဆိုရငျ ကိုယျ့မှာ ကိုယျခံအား ရှိမရှိဆိုတာကို ဒီ Antibody စမျးသပျမှုက ကာကှယျဆေး ထိုးပွီးတဲ့အခြိနျမှာ အရေးကွီးလာပါပွီ။”
မေး ။ ။ “ကာကှယျဆေးဆိုတဲ့ သဘောက ဒီရောဂါပိုး ပှားထားတဲ့ဟာကို ကိုယျထဲမှာ ထညျ့ပေးလိုကျတာလို့ နားလညျထားပါတယျ။ ဆိုတော့ ကာကှယျဆေး ထိုးပွီးတဲ့လူက ဒီရောဂါပိုး ရောကျနတေယျလို့ ကိုယျထဲကလညျး အသိအမှတျပွုပွီးတော့ ကိုယျခံအားတှေ ထုတျတာဆိုတော့ အခုလိုမြိုး ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမျးသပျတဲ့ဟာနဲ့ ဘာမြားသှားပွီးတော့ အနှောငျ့အယှကျတှမြေား ရှိနိုငျသလဲဆိုတာကို ပွောပွပေးပါ။”
ဖွေ ။ ။ ရှိတော့ရှိနိုငျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကာကှယျဆေးထဲကို ထညျ့ထားတာ ဒီဗိုငျးရပျဈ တဈခုလုံးကို ထညျ့ထားတာ မဟုတျဘူး။ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ ဆငျတူတဲ့ အပိုငျးလေးတပိုငျးကိုပဲ သုံးပွီးတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျခံအားကို ကွှအောငျလုပျပေးတာ။ အဲဒီအခါကွမှ ကိုယျ့ခန်ဓာကနေ Antibody ထုတျတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကိုယျက COVID Test ကိုဗဈစမျးသပျမှု လုပျတဲ့ စောစောကပွောတဲ့ Antigen ပဲဖွဈဖွဈ၊ PCR ပဲဖွဈဖွဈ စမျးသပျမှုနဲ့ သှားပွီးတော့ တိုငျးလုပျတယျဆိုရငျတော့ False Positive ဆိုပွီးတော့ ဖွဈနိုငျတဲ့ အလားအလာတော့ ရှိပါတယျ။ ဒါကလဲ အခွအေနပေျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ကာကှယျဆေး ထိုးထားတဲ့လူဆိုရငျ အကယျ၍ ဖြားလာတယျ၊ နာလာတယျ ဖွဈတယျဆိုရငျတော့ အဲဒီအခြိနျမှာ ကိုဗဈကိုပါ တိုငျးမယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ဆရာဝနျကို ပွောပွရမှာက ငါ့မှာ ကာကှယျဆေး ထိုးထားတယျ။ ဒါဆိုရငျ ကိုယျက False Positive ဖွဈနိုငျတဲ့ အခွအေနေ ရှိတယျ။ အကယျ၍ ကိုယျက ကိုဗဈကွောငျ့ ဖြားတာလဲ ဖွဈနိုငျတယျ။ ဒီအခြိနျက repository season တုပျကှေး flu တှလေညျး ဖွဈတယျ။ တခွား ရာသီဥတုဆိုငျရာ ဗိုငျးရပျဈပိုးတှလေညျး ရှိတယျဆိုတော့ အဲဒီအခြိနျမှာ ဘာကွောငျ့ဖွဈမှနျး မသိတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျက ကိုဗဈကာကှယျဆေးလညျး ထိုးထားပွီး၊ ကိုဗဈစဈဆေးမှု လုပျမယျဆိုရငျ False Positive ရနိုငျတာပေါ့။”
မေး ။ ။ “ကိုဗဈ-၁၉ စမျးသပျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာဆိုရငျ test kit တှကေလညျး သိပျမရသေးတော့ ဒါမြိုးအခွအေနေ၊ အနအေထားမြိုးမှာ စဈဆေးစမျးသပျမှု လုပျဖို့အတှကျ ဘာတှအေကွံပေးခငျြပါလဲ ဒီလို ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စမျးသပျတာကို။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ ။ ။ “အဲဒီလိုမြိုး စဈဆေးစမျးသပျမှုလုပျဖို့ သိပျမရှိသေးတဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျက ရောဂါလက်ခဏာ ပွလာတာတို့၊ ကိုဗဈလိုမြိုး ဆငျဆငျဖွဈတာတို့၊ အခု ဆောငျးတှငျးရာသီဆိုတာ့ ကိုဗဈလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ တုပျကှေးလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး ဖွဈတယျဆိုရငျ စဈဆေးမှုက လုံလုံလောကျလောကျ မရှိတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျလိုအကွံပေးလို့ ရသလဲဆိုတော့ ကိုယျ့ဟာနဲ့ကိုယျ အိမျမှာပဲ သီးခွားနဖေို့၊ အဓိက ဖွဈတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ Antigen Test ကတော့ ရှိနိုငျရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့။ Antigen Test က PCR ထကျစာရငျ ဆေးရုံတှေ၊ ဆေးခနျးတှမှော သုံးတာမြားတဲ့အတှကျ Antigen Test က နညျးနညျးလှယျတယျ။ ပွီးတော့ စရိတျလညျး နညျးနညျးသကျသာတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးတှေ ရှိနိုငျရငျတော့ အဲဒါမြိုးနဲ့ စမျးသပျနိုငျရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့။ လုံးဝမစမျးသပျနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ Q လုပျနိုငျရငျလုပျ၊ မိသားစုနဲ့ခှဲပွီးတော့ သကျသကျနနေိုငျပါတယျ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျပါ။ ကိုဗဈရောဂါပိုးရှိမရှိ အမွနျစဈဆေးနိုငျမယျ့ အိမျသုံး Covid 19 ပိုးစဈကရိယာ တမြိုးကိုတော့ အမရေိကနျနိုငျငံက Lucira ကုမ်ပဏီက တီထှငျနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။ နာရီဝကျလောကျအတှငျး အဖွထေုတျပေးနိုငျတဲ့ ဒီကရိယာကို ဆရာဝနျထောကျခံခကျြနဲ့ အရေးပျေါအခွနေမှော သုံးဖို့ FDA က အတညျပွုပေးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါကို တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးနိုငျဖို့တော့ အခြိနျယူရအုံးမယျ ဆိုတာကို တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။